Mareykanka Oo Markale Sheegay in Ciidamadiisu Khatar Kugaleen Duleedka Magaalada Kismaayo. – Calamada.com
Ciidamo Huwan ah oo isugu jiray Mareykan iyo Kenyaan ah ayaa weerar xooggan kala kulmay xoogaga Xarakada Al Shabaab xilli ay dhaq dhaqaaqyo ka wadeen duleedka magaalada Kismaayo.
Weerarka oo dhacay laba maalmood ka hor ayaa sababay khasaara soo gaaray ciidamada wada jirka ah oo ay hoggaaminayeen saraakiil Mareykan ah.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada huwanta ah uu weerar ku qabsaday halka loo yaqaan Janaay Cabdalle.
War kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu lakulmeen khatar kadib markii la weeraray markii dambana ay dalbadeen diyaaradaha wax duqeeya ee Drone-ka loo yaqaan.
Dad ku sugan magaalada Kismaayo ayaa sheegay in Meydadka iyo dhaawacyada maleeshiyada Bangaraafta lageeyay xarumo magaalada kuyaal kuwaas oo lagusoo dilay dagaalkii Janaay Cabdalle, waa markii labaad oo Mareykanku sheego in ciidamadiisa duullaanka jooga Soomaaliya ay khatar daran lakulmeen.
Marwalba oo ay saraakiisha Mareykanka dhaq dhaqaaqyo ka sameynayaan duleedyada Kismaayo waxay horay usii kaxaystaan ciidamada Kenya iyo maleeshiyaadka Bangaraafta loo yaqaan ee uu isagu tababartay kuna adeegto.
Weerarkii fashilmay ee deegaanka Mubaarak ayay sidaan oo kale saraakiil Mareykan ah halis ugu galeen kadib markii Al Shabaab ay dabin udhigtay ciidamada Bangaraafta ee Mareykanku habeennadii diyaarado ku dajiyo wilaayaatka si ay shacabka u xasuuqaan una arbushaan maamullada islaamiga ah.
Wasaaradda G/dhigga Mareykanka ayaa qiratay in 2 askari looga dilay dagaalka ka socda dalka Soomaaliya mid kamida askartaas ayaa sanadkan gudihiisa lagu dilay duleedka magaalada Kismaayo.
Previous: Dowladda Shiinaha Oo Tacdiibin Daran Ku Haysa Malaayiin Muslimiin Reer Turkistaan ah [Warbixin].
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo13-01-1440 Hijri.